Debaa Ụtụ Isi Ego Kanada nke Canada na NETFILE
Otu esi ejikwa ego ụtụ isi nke Kanada
Iji NETFILE iji Nyefee ụtụ isi nke Kanada na Kọmputa gị
NETFILE bụ ọrụ ntinye akwụkwọ ntanetị nke na-enye gị ohere iziga ụtụ isi ụtụ isi gị ma nwetaghachiri na ị ga-enweta ozugbo na Office Canada Revenue Agency (CRA) site n'iji Intanet na ngwaahịa NETFILE.
Iji nyefee ụtụ isi ego ụtụ isi nke Canada, ị ga-ebu ụzọ kwadebe nkwụghachi azụ gị site na iji ngwugwu ngwanrọ ụtụ isi nke azụmahịa, ngwa ngwa Weebụ ma ọ bụ ngwaahịa maka Apple ma ọ bụ ngwaọrụ mkpanaka gam akporo.
A ghaghị ịgbagha ngwaahịa ndị a maka NETFILE.
Mgbe ị na-atụ ụtụ isi gị n'Ịntanet, ị ga-ekwenye ozugbo na nzaghachi gị. Ọ bụrụ na ị meela ndokwa maka ego nkwụnye ego na Ụlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ego Canada, ị ga-akwụghachite ego ụtụ isi gị, ị ga-enweta nkwụsị ọsọ ọsọ karịa ma ọ bụrụ na i tinye akwụkwọ, ikekwe n'ime izu abụọ.
Otú ọ dị, ọ bụghị nnọọ mfe dị ka ịkụtu bọtịnụ ezipụ na ihe omume email gị, yabụ hapụ oge iji kwadebe ma nwee ntụsara ahụ na usoro ahụ.
Ikike ruru ụtụ isi na ụtụ isi
Ọ bụ ezie na ọtụtụ ụtụ isi ego na-enweta nwere ike ịdenye ya n'Ịntanet, enwere ụfọdụ ihe mgbochi. Dịka ọmụmaatụ, ịnweghị ike iji NETFILE weghachite nloghachi otu afọ tupu afọ 2013, ọ bụrụ na ị bụ onye na-abụghị onye Canada, ọ bụrụ na nọmba Social Number gị ma ọ bụ nọmba ụtụ isi ya malitere site na 09 ma ọ bụ ma ọ bụrụ na ị gara ụgha n'afọ abụọ gara aga.
E nwere ezigbo ihe mgbochi ndị ọzọ, biko jide n'aka na ị ga-edebanye ndepụta ndepụta niile tupu ịmalite.
Software to Tax Taxes Online
Ka ịdee ntanetịime ntanetị gị, ị ga-akwadebe akwụkwọ ụtụ isi ụtụ gị site na iji ngwanrọ ma ọ bụ ngwa Weebụ kwadoro maka CRA maka afọ ụtụ isi ugbu a. Nyocha CRA na nyochaa ngwanrọ n'etiti December na March, n'ihi ya, ọ bụ na ọ dịkarịa ala mbubreyo nke January tupu ngwugwu ngwanrọ azụmahịa ma ọ bụ ngwa Weebụ na-etinye na listi ziri ezi nke ngwanrọ a kwadoro.
Jide n'aka na akụrụngwa ị na-eme atụmatụ iji mee ihe bụ ịgba maka afọ ụtụ isi ugbu a. Ọ bụrụ na ịzụta ma ọ bụ budata ngwa ụtụ isi ụtụ gị tupu CRA kwadoro ya maka iji NETFILE, ị nwere ike ibudata ngwakọ site na onye na-ere ngwanrọ.
Ụfọdụ ngwanrọ akwadoro maka iji NETFILE eme ihe n'efu maka ndị mmadụ n'otu n'otu. Lelee ndepụta nke ngwanrọ a kwadoro na saịtị onye na-ere ihe maka nkọwa zuru ezu.
Nchọpụta maka NETFILE
Adreesị gị dị ugbu a ga-adị na faịlụ na CRA tupu ị zigaa nkwụghachi ego ụtụ gị site NETFILE. Nke a bụ otu esi gbanwee adreesị gị na CRA . Ị gaghị enwe ike ime ya site na NETFILE.
Ọ ga-adị gị mkpa ịnye nọmba nchịkọta Social na ụbọchị ọmụmụ gị mgbe ị na-ede akwụkwọ.
Ịkwesịrị ịnye ọnọdụ nke faịlụ ".tax" gị nke nwere nkwụghachi ụtụ gị na ị kwadebere iji ntinye akwụkwọ nkwado ụtụ NETFILE ma ọ bụ ngwa Weebụ.
Ọ bụrụ na ị nwere nchegbu gbasara nchedo nke onwe gị na nke ego mgbe ị na-eji NETFILE, ị ga-enyocha akwụkwọ NETFILE Nchebe site na CRA.
Nọmba nkwenye NETFILE
Ozugbo ị zigara nkwụnye ego ụtụ isi gị n'ịntanetị, CRA na-eme nlele nke ọma nlọghachi gị (na-abụkarị na nkeji) ma zigara gị nọmba nkwenye na-agwa gị na nzaghachi gị anatawo ma kweta.
Debe nọmba nkwenye ahụ.
Ozi Ntụkọ Ụtụ, Ozi na Ihe Odide
Debe akwụkwọ niile gbasara ụtụ isi, ụgwọ akwụkwọ na akwụkwọ ị na-eji dozie ụtụ isi ego gị. Okwesighi ka iziga ha na CRA ma ọ bụrụ na ụlọ ọrụ ahụ chọrọ ka ha hụ ha. Jide n'aka itinye nọmba ekwentị gị na ụtụ isi ụtụ isi gị ka CRA nwere ike ịkpọtụrụ gị ngwa ngwa. Ihe nlele nke nyocha na nkwụghachi ego nwere ike ịla ọdụ ma ọ bụrụ na CRA ga-akpọtụrụ gị.
Inweta Enyemaka na NETFILE
Maka enyemaka n'iji NETFILE, kpọtụrụ Enyemaka Online nke CRA. Ajụjụ Ndị A Na-ajụ Ọtụtụ ugboro nwekwara ike ịba uru.
Cheta, ọ bụrụ na ị na-agba ọsọ n'ime nsogbu, ị ka nwere ike ịdebe ụzọ ochie - site na ịnweta ụtụ isi ego , na-agbakwụnye mpempe akwụkwọ, na-etinye usoro na ụgwọ, ma na-ebute ya na ụlọ ọrụ nzipu ozi n'oge ị ga-edepụta ya. oge ikpebi.
Dee ya na Premier nke British Columbia
Newfoundland na Labrador Eziokwu
Niile Banyere Halifax, Isi Obodo nke Nova Scotia
Nkwụnye ego nkwụnye ego nke ụgwọ ịkwụ ụgwọ nke Canada
Ego ntinye ego nke Canada
Ụzọ 5 Ị Ga-akwụ Ụtụ isi nke Kanada nke Kanada Gị
Prime Minister William Lyon Mackenzie Eze
Otu esi akpọtụrụ Prime Minister nke Canada
Ot'u esi eji ihe omuma na Spanish
Oge ochie nke Camilla Parker-Bowles
N'ihi Gịnị Ka Ndị Nledo Na-eji Eke Ụmụ Mmadụ?
Mee Mmasị Mardi Gras - French Project
10 ndị ọkachamara na ndị ọkachamara na-achọ ka ha nwee ike ịbanye na United States
Okwu French na Nchọpụta
Ụdị Mgbochi na Microsoft Access 2013
Na-ekwu maka RR
Black History Essay Isiokwu
Ịghọta Echiche na Art
Iji Perl Chr () na Ord () Ọrụ
32 Ronald Reagan Kwuru na I Kwesịrị Ịmata
Aha Sikh na - amalite na A
Ogige Egwu nke Ụjọ
Otu esi egbochi echiche na US
Ụlọ Akwụkwọ University Baptist Texas University
CSUB GPA, SAT na ACT Data
Okwute Okwute Mkpụrụ Mkpụrụ Obi
Otu esi egbutu ego gomenti
Utu akwukwo maka ememe ememe agbamakwụkwọ
Nduzi maka nkwenkwe ụgha nke omuma
Nduzi maka Ịhọrọ Baibul Kasị Mma Ịzụta
Sun na Scorpio - akara Zodiac
Onyinye Onyinye nke Amụma